Ahoana no Hahafantatra Ny Aterineto tamin'ny Lehilahy Iray ny Fianakaviana sy ny Fifandraisana
Ahoana no Hahafantatra Ny Aterineto tamin’ny Lehilahy Iray ny Fianakaviana sy ny Fifandraisana
Teo aloha, ny tena mahazatra ny mampiaraka toerana ireo fikambanana alina, ny fivoriana amin’ny alalan’ny namana, amin’izao fotoana izao, dia misy fomba maro ny mampiaraka ao miandalana ny fiaraha-monina. Ny tena malaza dia ny olom-pantatra tamin’ny alalan’ny tambajotra sosialy sy ny isan-karazany ny mampiaraka toerana. Tsara fenoy amin’ny fampahalalana momba ny tenanao. Ity fizarana ity dia tsy tena manan-danja vazivazy, raha tena zava-dehibe no hivory hiaraka ny lehilahy. Miezaka ny hitokantokana ny tenany araka izay azo atao. Tsy tapaka ny fitsidihana ny valan-javaboary, ho azo antoka ny milaza izany. Ao amin’ny ho avy, dia ho afaka manasa ny lehilahy ho tongotra miara. Tsy mameno ny fanontaniana mombamomba bebe kokoa ny vaovao. Minoa ahy, tsy dia mahaliana kokoa ny boky noho ny tantaram-piainany.
Toy ny fitsipika, ny fiarahana sy ny toerana sy ny tambajotra sosialy be dia be ny mombamomba tsy misy sary. Izy ireo dia tsy hahazo ny fahombiazana. Be dia be mahafinaritra kokoa ny mifandray amin’ny olona iray ao amin’ny tambajotra manana ny sasany, fara fahakeliny, hevitra momba ny interlocutor. Na izany aza, ny album manontolo dia tsy miparitaka. Ny mpifanandrina dia mety mieritreritra fa ianao hiaina mivantana ao amin’ny tontolo virtoaly. Ny tena tsara izany soso-kevitra nataony — ny sary. Tsy maintsy ho ny tsara indrindra sary fa dia milaza amintsika kely momba anao. Miezaka ny hifandray amim-panajana sy tactfully. Tsy hanombohana ny fifanakalozan-kevitra amin’ny vahiny anao ny olona hoe: ‘Salama.
Izany dia inoana fa misy fitsipika, fomba fiasa, dia liana ny interlocutor. Koa, tsy manana ny sain’ny husky ny sary, fanomezam-pahasoavana, na samy hafa winks. Raha nandoa ny fanomezam-pahasoavana manokana natao mba hanatsarana ny mpamorona ny toerana, avy eo winks sy nekena mba hisolo tena ny singa ny fankatoavana. Ny fihetsika, amin’ny alalan’ny fomba, dia tena diso tafahoatra. Tsy manomboka ny fifandraisana amin’ny mampamangy. Avy amin’ny interlocutor fiderana tsy mafana na mangatsiaka. Ankoatra izany, ianao dia afaka voalohany very toky. Tsara ny famerenana ny sary rehetra ary mamaky ny vaovao ianao dia tia ny olona. Andramo ny mitady tombontsoa iombonana. Ny fomba fiasa tahaka izany dia engender tsara ny fifanakalozan-kevitra ary handefa ny ela chat. Mametraka fanontaniana ny antoko hafa. Dia toy izany no, dia ho tafiditra tsikelikely ny mpanohitra ao amin’ny chat. Ny valiny manome tsipiriany kokoa, dia tsy hitondra ny fotoana. Fanontaniana miezaka ny hametraka izany fa izy ireo dia tsy hahazo valinteny mazava ny ‘eny’ na ‘tsia. ‘Manaraka rosiana ny fitsipi-pitenenana. Tsy manahirana ny miresaka. Ny olona rehetra dia manana ny raharaha. Tsy manoratra ny olona iray isa-minitra. Fa tsara ny miresaka indray mandeha isan’andro, fa ny hatsarana. Araka ny fomba, ny fotoana ho an’ny miresaka dia azo atao mialoha hifampiraharaha amin’ny olona. Andramo ireo minitra mba hizara ny tantarany sy ny zava-niseho nandritra ny andro. Izany dia mahaliana kokoa noho fotsiny mba hahitana hoe iza, inona izao no ampiasaina sy ny fomba hanaovana izany.
Tsy hanemotra ny fivoriana
Virtoaly ny serasera dia afaka mandray ny volana maro. Fa be mba misisika eo amin’ny fivoriana dia tsy ilaina. Ny tolo-dalàna dia tokony ho unobtrusive. Ohatra, ianao dia afaka manolotra ny mandeha any amin’ny sarimihetsika ho an’ny andro ny fivoriana na an-tongotra tao amin’ny zaridainam-panjakana. Raha toa ianao ka lasa teo, mieritreritra momba izany, ianao dia mety te hanova ny resaka. Ny Aterineto dia be dia be ny antsoina hoe virtoaly ry zalahy fa, amin ny fitsipika, dia tsy voaendrika ho velona ny fifandraisana
← Shina Fitiavana Cupid Review Des Vaovao Farany Ny Ampakarina
Ny Antony Vehivavy Shinoa Hanambady Vahiny Ny Olona →